6 Ny fitsangatsanganana an-dalamby betsaka indrindra manerana an'i Etazonia
Home » Lahatsoratra farany farany » Hostpost » 6 Ny fitsangatsanganana an-dalamby betsaka indrindra manerana an'i Etazonia
Hostpost • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Etazonia Vaovao Vaovao
Famaritana: ny fitsangatsanganana dia iray amin'ireo fiainana niainana indrindra. Raha mbola tsy nanao fitsangantsanganana an-dalamby ianao dia anjaranao no mankafy ny fomba fijery mahavariana sy tsy hay hadinoina an'i Etazonia.
Raha mpianatra eny amin'ny oniversite be atao ianao, izay efa niahiahy foana momba ny enti-mody, ny sanganasa ary ny valin'ny fanontaniana, toy ny “Ara-dalàna ve ny fanoratana ary mandaitra? ” mila miala sasatra ianao ary manararaotra mahita ny tontolo. Ny fomba tsara hanombohana dia amin'ny fikarohana ny tanindrazanao. Tendrombohitra mahasarika maso, fomba fijery mahavariana, ary ny toerana malaza dia atolotra ho an'ireo mpitsangatsangana mafana fo izay misafidy fitsangatsanganana hafakely.
Alohan'ny nanjary nalaza ny dia fiaramanidina sy ny dia lavitra dia nampiasain'ny olona ny fiaran-dalamby ho iray amin'ireo fomba mahaliana sy mahomby indrindra amin'ny dia. Mampalahelo fa raha misafidy ny hitondra fiara ianao dia tsy afaka mahita ny toerana mahafinaritra rehetra, ao anatin'izany ny tany efitra feno fasika, tendrombohitra avo ary ranomasina manjelanjelatra. Vonona handentika ny tenanao amin'ny tontolon'ny fitsangatsanganana mahafinaritra ve ianao? Fantaro ny tena ilaina fanadihadiana pro hevitra , karakarao ny asanao eny amin'ny oniversite, ary mandehana amin'ny dian'ny lamasinina tsy hay hadinoina manodidina an'i Etazonia. Zahao ireo fitsangatsanganana enina mahaliana indrindra tadidinao foana.
Starlight Coast. Izy io angamba, iray amin'ireo fitsangatsanganana mahafinaritra indrindra ho an'ireo mpitsangatsangana an-dalamby tsy manam-pahaizana. Maherin'ny 35 ora mitaingina mahavariana izay tsy hanome fotoana anao miala sasatra. Tsy hampiharihary ny hatsaran-tarehin'i Seattle fotsiny io, fa hanana fotoana tsara hankafizana ny hakanton'i Portland sy Los Angeles koa ianao. Ny mpizahatany dia avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao mankafy an'io traikefa sarobidy io. Tsy ny malaza indrindra ihany, fa koa mitaky làlana lavitra izay hanome fotoana anao hanombatombanana ny tombony rehetra amin'ny dia mitaingina lamasinina. Ny riandrano mahavariana, tendrombohitra feno lanezy, ala maitso, ary toerana hafa dia hisarika ny fonao ary hijanona ao anaty fitadidianao mandritra ny androm-piainanao.
Làlana mankamin'ny Grand Canyon. Raha resy lahatra ianao fa nahita ny Grand Canyon imbetsaka dia mila mahazo tapakila ary mijery ilay toerana amin'ny fomba hafa mihitsy. Hahita tontolo vaovao ianao ao anatin'ny ora maromaro. Ankafizo ny traikefa nahafinaritra an'ny fiaran-dalamby ary manararaotra mankafy ny lemaka midadasika sy ny ala kesika, mahita antilopa ary bibidia hafa, henoy ny tantara mahaliana mifandraika amin'ilay toerana. Ny lalamby mankany amin'ny Grand Canyon no làlana ankafizin'ireo mpitsangatsangana, izay liana amin'ny toerana miavaka sy ny toerana tsy hay hadinoina. Hahita lafiny hafa tanteraka amin'ilay faritra ianao.
Empire Builder dia fitsangatsanganana an-dalamby mahatalanjona iray izay hahafahanao mahita ny fomba fijery mahafinaritra an'i Chicago, Portland, ary ireo tanàna eo anelanelany. Ity fitsangatsanganana epic ity dia tsy hamela anao tsy hiraharaha velively fa hanao fiantraikany maharitra. Na dia tsy dia maharitra maharitra aza izy io, dia feno faritra mahaliana sy panorama mahatalanjona. Raha te hankafy làlana mahafinaritra sy manaitra ianao dia safidio ny roomette misy seza izay azo ovaina ho fandriana mora foana. Hanampy anao hankafy ny traikefa nahafinaritra io na dia amin'ny alina aza.
Adirondack. Mpianatra eny amin'ny oniversite miasa mafy ve ianao ka tsy afaka mandray ilay fanontaniana hoe “Ara-dalàna ve i edubirdie? ” tsy ao an-tsaina? Ity no fahafahanao miala sasatra, manadino ireo olana sy olana rehetra any amin'ny oniversite ary mankafy fomba fijery mahafinaritra. Ny dia mandritra ny adiny 10 dia hanaitra anao amin'ny panoramas mahatalanjona ao amin'ny lohasahan'i Hudson River, New York City, Saratoga Springs, ary toerana hafa. Vonona ny hanohy ny dia ve ianao? Hiampita ny sisintanin'i Canada ny fiaran-dalambinao ary hifindra any Montreal. Toerana manan-tantara sy toerana be voninahitra no tsy hamela anao tsy hiraharaha.
Sunset Limited. Raha manana 48 ora farafahakeliny ianao hankafizanao mitaingina lamasinina miampita an'i Etazonia, Sunset Limited no safidy tokony hodinihinao. Omano mialoha ny fiainanao, satria mihodina intelo isan-kerinandro ny lamasinina. Ankafizo ny fomba fijery mahasarika an'i Los Angeles mankany New Orleans ary mankafy ny fahitana eto amin'ny firenena. Ny efitra, havoana, ary lemaka ahitanao fotoana hankafizanao eny an-dàlana dia hamela fahatsapana maharitra anao. Ho fanampin'izany, dia handalo ny zaridainam-pirenena Arizona Saguaro fantatra ianao, ny Ranomasina Salton California, ary ny tanànan'ny anjely mahatalanjona.
California Zephyr. Hatramin'ny 1949, dia iray amin'ireo fitsangantsanganana ankasitrahana be dia be manerana ny Continental Divide. Haharitra 51 ora ny fahitanao ireo panorama manaitra indrindra ary hankafizanao ny toerana tsy hay hadinoina any Etazonia. Manomboka any Chicago ny traikefa nahafinaritra ary miainga any California. Handalo ny sasany amin'ireo toerana mahaliana indrindra ianao izay hanome anao fotoana hahitanao ny firenena amin'ny fomba hafa.
Toa toa mahaliana kokoa sy tsy hay hadinoina ireo dia nentim-paharazana nentim-paharazana, saingy fiheveran-diso ity izay hofoanana amin'ny fotoana hidiranao ao anaty lamasinina. Ny atmosfera tsy manam-paharoa, ny fomba fijery mahaliana ary ny fihetseham-po tsy manam-paharoa dia tsy azo ampitahaina amin'ny zavatra hafa. Ho fanampin'izany, be dia be ny fitsangatsanganana azonao ankafizina. Raha tsy vonona ny handeha amin'ny dia 40-50 ora ianao, dia azonao atao ny misafidy traikefa fohy 5-8 ora. Na izany na tsy izany, na inona na inona fitsangatsanganana nofidinao, dia azo antoka fa zavatra niainana mendrika ny sainao, ny fotoana ary ny vola izany.